Ukusetyenziswa okuqhubekayo kwamacala omatshini wasentwasahlobo oPrice-Rayson | Rayson
Rayson kwiRayson yeZowuni yoShishino, eHuasha Road, eShishan, eFoshan High-Tech Zone, eGuangdong, China Iimveliso eziphambili Amacala aphindwe kabini asetyenziswayo oomatrasi basentwasahlobo abaPrinta-iRayson
Le mveliso ayisiyonto nje ibekwe kwindawo kodwa igqibezela indawo. -Utshilo omnye wabathengi bethu.
Indawo yokuvela: Guangdong, China (kwilizwekazi)
Igama lebrand: Rayson, OEM
Ukomelela: Ithambile / iphakathi / inzima
Igama Trade: EXW, FOB, CIF, Indlu ngendlu
Uhlobo lwenkampani: Umzi mveliso, Ukwenziwa
Ilaphu: Ilaphu elinithiweyo
Isicelo: Ikhaya, ihotele, indawo yokuhlala
Ixesha lokuhlawula: I-TT / LC, i-30% IDIPHOZIZI EYIHLAWULWE PHAMBI KOKUQHUTYWA, I-70% YOKULINGANISA IINKCUKACHA ZAMAXWEBHU OKUTHUNYELWA NGAPHAKATHI KWEMIHLA ESixhenxe SOKUSEBENZA
Silandela ngokungqongqo iinkqubo zolawulo lomgangatho esemgangathweni ukuqinisekisa ukuba iimveliso zethu ziyahlangabezana okanye zigqithile kulindelo lwabathengi bethu. Ukongeza, sibonelela ngeenkonzo zentengiso yasemva kwentengiso kubathengi kwihlabathi liphela. Emva kweminyaka yophuhliso, siye saseka ubudlelwane intsebenziswano ixesha elide kunye nabathengi bethu kulo lonke ihlabathi. Nceda uqiniseke ukuba sinelungelo lokuthumela ngaphandle iimveliso zethu kwaye ngekhe kubekho monakalo wenzekileyo kwimpahla ehanjisiweyo. Siyakwamkela ngokunyanisekileyo umbuzo wakho kunye nomnxeba. Ngemigca epheleleyo yokuvelisa kunye nabasebenzi abanamava, uRayson unokuzimela ngokuzimeleyo, aphuhlise, avelise, kwaye avavanye zonke iimveliso ngendlela efanelekileyo.
Uhlala ixesha elingakanani umatrasi wakho? Yonke imatrasi yahlukile. Ukuba uphosa ubusuku okanye uvuke ngeentlungu lixesha lokuba ufumane umatrasi omtsha nokuba ungakanani na. Sincoma ukuba ujonge i-tag yomthetho kwaye utshintshe ubuncinci yonke iminyaka esibhozo. Zeziphi iindlela zokuhlawula ozamkelayo? I-LC kumbono / nge-TT, i-30% ye-Deposi kunye ne-70% eseleyo ichasene neekopi zamaxwebhu okuhambisa witinin iintsuku ezisi-7 zokusebenza. 1. Beka ibhokisi kwindawo ethe tyaba kwigumbi lakho lokulala, tsala ngononophelo umatrasi uze ubeke ebhedini yakho. 2.Sika isikhwama sangaphandle ngononophelo ngesikere uqiniseke ukuba awusiki iplastiki embi ngaphakathi okanye umatrasi, musa ukumangalela imela. 3.Qengqa umatrasi otywiniweyo ongenamntu uyokulala ebhedini yakho 4.Yisika ngononophelo ingxowa yeplastiki ecaleni kwewotshi njengoko umatrasi uqala ukubola, Susa ingxowa yeplastiki. 5.Vumela iiyure ezingama-24 ukuba umandlalo wakho omtsha wandiswe ngokupheleleyo.
1.Iflethi icinezelwe ngepallet yomthi
2.Roll phezulu kunye ibhokisi okanye okwakhiwa iphepha